Crankshaft imoto ngaphezulu >>
Ilungele iimoto, iinqanawa, izithuthi zobunjineli, oomatshini bezolimo, iseti yejenreyitha, umgangatho wokuqala, ngenkangeleko entle, uxinizelelo oluphezulu, ukuguda, ukukhanya kunye nokuqina emva kokugqiba. Imveliso nganye iye yavavanywa ngokungqongqo kwaye umgangatho wayo uqinisekisiwe. Ukupakishwa kwebhokisi kunembonakalo elungileyo kunye nomjikelo wemveliso ozinzileyo: iintsuku ezingama-20 ukuya ku-30 ​​zomsebenzi, ukupakisha okungathathi hlangothi / ukupakisha kwasekuqaleni, indlela yothutho: umhlaba, ulwandle kunye nomoya.
I-camshaft yemoto ngaphezulu >>
Ilungele iimoto, iinqanawa, izithuthi zobunjineli, oomatshini bezolimo, umgangatho wokuqala, ngokubonakala okuhle, uxinizelelo oluphezulu, ukuguda, ukukhanya kunye nokuqina emva kokugqiba. Imveliso nganye iye yavavanywa ngokungqongqo kwaye umgangatho wayo uqinisekisiwe. Ukupakishwa kwebhokisi kunembonakalo elungileyo kunye nomjikelo wemveliso ozinzileyo: iintsuku ezingama-20 ukuya ku-30 ​​zomsebenzi, ukupakisha okungathathi hlangothi / ukupakisha kwasekuqaleni, indlela yothutho: umhlaba, ulwandle kunye nomoya.
I-flywheel yemoto ngaphezulu >>
Intloko yesilinda yezithuthi ngaphezulu >>
Umgangatho ophezulu wecrankshaft yemoto ilungele iRen ...
Uluhlu olupheleleyo crankshafts ngomatshini Cran ...
Shijiazhuang uSamuweli Auto Izahlulo Co., Ltd.kuyinto umenzi ngobuchule iindawo auto. Kwiminyaka yemveliso kunye nokusebenza, kuye kwasekwa umgca wemveliso kunye nokuqhubekeka kunye nobuchwephesha obugqwesileyo, izixhobo eziphambili zemveliso, iindlela zokuqala zokuvavanya kunye nolawulo olungqongqo lomgangatho. Isiqinisekiso se-ISO9001 2000 somgangatho wamazwe aphesheya, umgangatho ufikelela kwimigangatho yezobuchwephesha yenjini yomlilo yangaphakathi ye-crankshaft JB / T6727-1999, JB / T51049-1999.
Renault Peugeot crankshaft zithunyelwa eYiputa
Umenzi we-China oPhezulu oSebenzayo weAluminiyam ye-Injini yeCrank Transmission Spline Shaft Custom Made